Kusolwa eyamatekisi kushona abathathu - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa eyamatekisi kushona abathathu
Kusolwa eyamatekisi kushona abathathu
LIBIZWE wukufa lisePretoria isosha elidutshulwe nabanye abantu ababili okukhona kubo nowesifazane livakashele kubo eMoba, eMnambithi kade lizobuyela emsebenzini ngoMsombuluko elidutshulwe ngawo ebusuku.
UMnu Ncedo Dladla (osesithombeni) udutshulwa nje, ubesehlehlisile ukubuyela emsebenzini, esezokhuphuka ngoLwesibili.
Udutshulwe eseZakheni khona eMnambithi noMnu Ndima Dladla nalona wesifazane ongatholakalanga igama lakhe.
Ngokuthola kweLANGA, kusolwa impi phakathi komndeni wakwaMadlala nowakwaGumede, kanti laba abashonile kunezinsolo zokuthi bathelwe ngamachaphazelo.
Umthombo weLANGA osondele kulolu daba, uthi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko, izisulu bezihamba nezinsizwa ezimbili zakwaMadlala, ezikwazile ukubaleka ngesikhathi kudutshulwa.
“Umfana wakwaMadlala ubenenkinga efelwe yimoto, base beyomdonsisa yona ebusuku kwa-E, eZakheni. Laba bakwaDladla nentombazane bebesahleli ngaphakathi emotweni abebefike ngayo, kanti abakwaMadlala bona bebesaxhuma izintambo zokudonsa le ebinenkinga, kanti kuzoqhamuka enye, abantu abebephakathi bangabuza lutho, bavulela ngenhlamvu.
“AbakwaMadlala basinde ngokulambisa,” kusho umthombo. Ngokuthola kweLANGA ngabazifikele endaweni yesigameko, abashonile kubukeka bedutshulwe ngezibhamu ezinkulu ngoba imihlathi ibikhumukile.
Ilungu lomndeni wakwaDladla elingathandanga ukudalulwa ngenxa yobucayi bodaba lithi akungatshazwa ukuthi amalungu omndeni wawo afele abanye abantu.
“Sonke sisadumele ngokwenzekile, akukholakali namanje. UNcedo-ke yena ubengapheli kwaMadlala ekhonzene nabafana bakhona, abanye bese bezitshela ukuthi uhlala khona ngenxa yokuzwana kwabo, kanti uNdima yena ubengasondelene nabo.
“Kusho ukuthi ubethathwe ngoba kuyodonswa imoto ebinenkinga,” kusho ilungu lomndeni.
Litshele ILANGA ukuthi uNcedo bekungakapheli nesikhathi eside ethole umsebenzi wobusosha.
“Ubengakadli ngisho imali yakhe emuva kwesikhathi eside ezabalaza ebamba amatoho eMgungundlovu izinto zingahlangani kahle.
“Ubelungile kakhulu, besihlale sizibuza nokuthi kwakhona ukungena kwakhe kwezobusosha ngabe kwenzeke kanjani ngoba akuyena umuntu onesibindi nobengakwazi ukubhekana nezimpi,” kusho ilungu lomndeni.
Kuthiwa ukungaboni ngaso linye komndeni wakwaMadlala nowakwaGumede, sekunesikhathi eside kanti kusolwa amatekisi phakathi nakuba abakwaMadlala kunemibiko ethi akekho oyaziyo itekisi yakhona.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukubulawa kwabathathu eZakheni. Bekungakaboshwa muntu. Kusaphenywa.
Previous articleUboshiwe “obezenza udokotela” ezibhedlela
Next articleKuqhume izibhamu kuboshwa amaciko abebhikisha